एटोरवास्टाटिन बनाम सिम्वास्टाटिन: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि उत्तम छ - औषधि बनाम मित्र | सेप्टेम्बर 2021
औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा समुदाय, कम्पनी स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण घरपालुवा जनावर स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार मनोरञ्जन कम्पनी चेकआउट कम्पनी, औषधि जानकारी समाचार, कल्याण स्वास्थ्य शिक्षा भारी खेल प्रेस खेलहरु कल्याण
मुख्य >> औषधि बनाम मित्र >> एटोरवास्टाटिन बनाम सिम्वास्टाटिन: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि उत्तम छ
एटोरवास्टाटिन बनाम सिम्वास्टाटिन: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि उत्तम छ
एटोरवास्टाटिन र सिम्वास्ट्याटिन दुई सामान्यतया निर्धारित स्टेटिन औषधि हुन् जसले उच्च कोलेस्ट्रोलको उपचार गर्दछन्। तपाईको डाक्टरले यी औषधी मध्ये एउटा तोक्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईसँग उच्च स्तरको LDL (कम घनत्वको लाइपोप्रोटीन) कोलेस्ट्रोल छ, जसलाई खराब कोलेस्ट्रोल पनि भनिन्छ। कोलेस्ट्रॉलको स्तर घटाएर, एटोरवास्टाटिन वा सिम्वास्ट्याटिनले हृदयघात र स्ट्रोकको जोखिम कम गर्न मद्दत गर्दछ।
अधिक विशेष रूपमा, एटोरभास्टाटिन र सिम्वास्टाटिन एचएमजी-सीओए रिडक्टसेस अवरोधकर्ताहरूको रूपमा काम गर्दछन्। HMG-CoA रिडक्टेज इन्जाइम ब्लक गरेर, यी स्टेटिनहरू कलेजोमा कोलेस्ट्रोलको उत्पादन घटाउनुहोस्। रगतमा कम कोलेस्ट्रोल प्रसारणको साथ, शरीरले अत्यधिक कोलेस्ट्रोल र कम समग्र कोलेस्ट्रॉलको स्तर पुन: अवशोषित गर्न सक्षम छ।
एटोरवास्टाटिन र सिम्वास्टाटिनले समान तरिकाले कार्य गर्न सक्दछन् तर उनीहरूसँग खुराक, प्रशासन र सम्भावित साइड इफेक्टहरूमा फरक छन्।
एटोरभास्टाटिन र सिम्वास्टाटिन बीचको मुख्य भिन्नता के हो?
एटोरवास्टाटिन यसको ब्रान्ड नाम, लिपिटरबाट पनि परिचित छ जुन १ 1996 1996 in मा एफडीए-द्वारा अनुमोदित भएको थियो। अन्य प्रयोगहरू मध्ये यो पनि हार्ट अटैक वा स्ट्रोकको जोखिम कम गर्न सिफारिश गरिएको छ। कोरोनरी हृदय रोग ।
एटोरवास्टाटिन (एटोरवास्टाटिन के हो?) को १ 14 घण्टा लामो आधा जीवन छ। ड्रग एक पटक सक्रिय हुन्छ सक्रिय छ, र यसको लिपिड कम गतिविधि को लागी रहन सक्छ २० देखि hours० घण्टा प्रशासन पछि। रोसुवास्टाटिन, वा क्रिस्टरसँगसँगै, अटोरभस्टाटिन सिमवास्टाटिन र प्रावास्टाटिन जस्ता अन्य स्टेटिनहरू भन्दा बढी शक्तिशाली औषधि हो।
एटोरभास्टाटिन १० मिलीग्राम, २० मिलीग्राम, mg० मिलीग्राम, र mg० मिलीग्राम ट्याब्लेटमा उपलब्ध छ। सिफारिश गरिएको सुरू मात्रा दैनिक १० वा २० मिलिग्राम एक पटक हुन्छ जबकि नियमित खुराक १० देखि mg० मिलीग्राम दैनिक एक पटक हुन सक्दछ। एटोरभास्टाटिन दिनको कुनै पनि समयमा लिन सकिन्छ।
Simvastatin (Simvastatin के हो?) यसको ब्राण्ड नाम, Zocor द्वारा पनि चिनिन्छ। एटोरवास्टाटिनको तुलनामा, सिम्वास्टाटिन एउटा पुरानो औषधि हो जुन १ 199 199 १ मा पहिलो एफडीए स्वीकृत भएको थियो। अन्य स्ट्याटिनहरू जस्तै यो पनि हृदयघात जोखिम भएकाहरूमा हृदयघात र स्ट्रोकको जोखिम कम गर्न प्रयोग गरिन्छ।
गर्भावस्था को समयमा पेट खराब को लागी के लिने
Simvastatin मा सबै भन्दा राम्रो मूल्य चाहनुहुन्छ?
सिम्वास्टाटिन मूल्य सचेतका लागि साइन अप गर्नुहोस् र जब मूल्य परिवर्तन हुन्छ फेला पार्नुहोस्!
एटोरभास्टाटिन विपरीत, सिम्वास्टाटिन एक प्रोड्रग हो । अर्थ, यो यकृतमा मेटाबोलिज्ड, वा प्रशोधन नभएसम्म सक्रिय हुँदैन। प्रशोधन गरिसकेपछि, सिम्वास्टाटिन यसको सक्रिय रूप, सिम्वास्टाटिन एसिडमा परिणत हुन्छ, जसमा करिब एकदेखि दुई घण्टाको आधा जीवन हुन्छ।
सिम्वास्टाटिन strengths मिलीग्राम, १० मिलीग्राम, २० मिलीग्राम, mg० मिलीग्राम, र mg० मिलीग्रामको शक्तिमा उपलब्ध छ। सिफारिस गरिएको सुरू मात्रा १० वा २० मिलिग्राम दैनिक एक पटक हो, र सामान्य खुराक प्रति दिन to देखि mg० मिलीग्रामसम्म हुन सक्दछ। सिम्वास्टाटिनलाई राती लिन सिफारिस गरिन्छ।
एटोरभास्टाटिन र सिम्वास्टाटिन बीच मुख्य भिन्नता
औषधि वर्ग HMG-CoA रिडक्टसेस अवरोधक
स्ट्याटिन HMG-CoA रिडक्टसेस अवरोधक
ब्रान्ड नाम के हो? Lipitor Zocor
मानक खुराक के हो? १० देखि mg० मिलीग्राम एक पटक दैनिक once देखि mg० मिलीग्राम एक पटक
विशिष्ट उपचार कति लामो हुन्छ? एटोरवास्टाटिनसँगको उपचार कोलेस्ट्रॉलको स्तर प्रबन्ध गर्न र हृदयघात र स्ट्रोकको कम जोखिम कायम गर्न दीर्घकालीन हो। सिम्वास्टाटिनको साथ उपचार कोलेस्ट्रॉलको स्तर प्रबन्ध गर्न र हृदयघात र स्ट्रोकको कम जोखिम कायम गर्न दीर्घकालीन हो।
कसले औषधी प्रयोग गर्दछ? वयस्कहरू; १० देखि १ years वर्ष उमेरका बच्चाहरू र किशोर-किशोरीहरू heterozygous पारिवारिक हाइपरकोलेस्ट्रोलिया (HeFH) को साथ वयस्कहरू; १० देखि १ years वर्ष उमेरका बच्चाहरू र किशोर-किशोरीहरू heterozygous पारिवारिक हाइपरकोलेस्ट्रोलिया (HeFH) को साथ
शर्तहरु atorvastatin र simvastatin द्वारा उपचार
एटोरभास्टाटिन र सिम्वास्टाटिन समान उद्देश्यका लागि प्रयोग गरिन्छ। ती दुबै उच्च कोलेस्ट्रॉल स्तर (hypercholesterolemia), उच्च लिपिड स्तर (hyperlipoproteinemia), र उच्च ट्राइग्लिसराइड स्तर (hypertriglyceridemia)। त्यहि समयमा, स्ट्याटिनहरूले एचडीएल कोलेस्ट्रॉल वृद्धि गर्न मद्दत गर्दछ, राम्रो कोलेस्ट्रॉलको एक प्रकार जुन हृदय रोगको विरूद्ध सुरक्षात्मक प्रभावहरू राख्छ।
एटोरभास्टाटिन र सिम्वास्टाटिनले पनि निम्नमा हृदयघात र स्ट्रोकको जोखिम कम गर्न सक्छ:
वयस्कहरू कोरोनरी हृदय रोग (CHD) बिना जोसँग धेरै जोखिम कारकहरू छन्
वयस्कहरू टाइप २ मधुमेहको साथ CHD बिना, तर जससँग धेरै जोखिम कारकहरू छन्
वयस्कहरू निदान गरिएको CHD का साथ
हृदय घटनाहरूका लागि जोखिम कारकहरूमा उच्च रक्तचाप (उच्च रक्तचाप) र उच्च रगत चिनी (मधुमेह) सम्मिलित हुन सक्छ।
एटोरभास्टाटिन र सिम्वास्ट्याटिनले कोलेस्ट्रॉल र लिपिडको मात्रा कम गर्न सक्छ जेनेटिक लिपिड डिसआर्डरहरू , जस्तै होमोजिगस पारिवारिक हाइपरकोलेस्ट्रोलिया (HoFH)। यी स्टेटिनहरूले बच्चा र किशोर-किशोरीहरू (१०-१-17 वर्ष उमेर) लाई heterozygous पारिवारिक हाइपरकोलेस्ट्रोलिया (HeFH) को उपचार गर्न सक्छ।
एथेरोस्क्लेरोसिसको उपचार, वा रक्त वाहिका भित्ताहरूमा फ्याटिन जम्मा गर्नु, एटोरभास्टाटिन वा सिम्वास्टाटिन सिफारिश गर्नुपर्ने अर्को कारण पनि हो। रक्त नली भित्तामा पट्टिका कम गरेर, यी स्टेटिनहरूले छाती दुख्ने (एनजाइना) जस्ता लक्षणहरूलाई कम गर्न मद्दत गर्दछ।
सर्त एटोरभास्टाटिन सिम्वास्टाटिन
Hyperlipoproteinemia हो हो
हृदयघात र स्ट्रोकको रोकथाम हो हो
एथेरोस्क्लेरोसिस हो हो
के एटोरभास्टाटिन वा सिम्वास्टाटिन थप प्रभावकारी छ?
एटोरभास्टाटिन र सिम्वास्टाटिन दुबै प्रभावी स्टेटिन औषधि हुन्। अध्ययनहरूले देखाए कि जसले उनीहरूको स्टेटिन औषधि लिन्छन् कम से कम% ०% समय हार्ट अट्याक, स्ट्रोक वा कुनै पनि कारणले गर्दा मर्ने जोखिम 45 45% कम छ। सामान्यतया, स्ट्याटिनहरू कोलेस्ट्रॉलको स्तर घटाउन र हार्ट अटैक र स्ट्रोकको घटना कम गर्नमा धेरै प्रभावकारी हुन्छन्।
एटोरभस्टाटिन र सिम्वास्टाटिनको तुलना गर्ने कुनै ठुलो टु-हेड ट्रायल परीक्षण गरिएको छैन। यद्यपि, एटोरभास्टाटिन सिम्वास्टाटिन भन्दा बढी शक्तिशाली औषधि मानिन्छ। मा एउटा भर्खरको तुलनात्मक अध्ययन , एटोरभास्टाटिन सिम्वास्टाटिनको तुलनामा LDL कोलेस्ट्रॉल (LDL-C) कम गर्नमा बढी प्रभावकारी फेला पर्‍यो। यस अध्ययनले rand० अनियमित, क्लिनिकल परीक्षणहरू, र अन्य स्ट्याटिन ड्रग्सहरू जस्तै फ्लुभास्ट्याटिन, प्रवास्टाटिन, रोसुवास्टाटिन, र लोभास्टाटिनको तुलना संकलन गरी परिणामहरू संकलित गर्‍यो। अध्ययनमा LDL स्तर कम गर्न रोसुवास्टाटिनसँग सब भन्दा उच्च क्षमता थियो।
एक मा व्यवस्थित समीक्षा , In 75 फरक अध्ययन स्ट्याटिन औषधीहरूको तुलना विश्लेषण गरिएको थियो। अध्ययन समूहको नतीजा अनुसार एटोरभास्टाटिन १० मिलीग्रामको दैनिक खुराकले एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 30०% -40०% घटाउन सक्छ जबकि सिम्वास्टाटिन १० मिलीग्रामको दैनिक खुराकले एलडीएल कोलेस्ट्रोल २०% -30०% घटाउन सक्छ। यद्यपि यस भिन्नताको क्लिनिकल प्रभावहरू महत्वपूर्ण नहुन सक्छन्।
तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श गर्नुहोस् तपाईंको लागि उत्तम स्ट्याटिन उपचार। स्टेटन्सको प्रभावकारिता तपाईंको मेडिकल र पारिवारिक इतिहासमा निर्भर गर्दछ, अन्य कारकहरू बीच।
कभरेज र लागत तुलना अटोर्वास्टाटिन बनाम सिम्वास्टाटिनको?
एटोरवास्टाटिन एक जेनेरिक औषधिको रूपमा उपलब्ध छ जुन प्राय: मेडिकेयर र अन्य बीमा योजनाहरूले ढाक्छ। यो दैनिक गोलीको रूपमा तोकिन्छ जुन -०-दिन वा 90 ०-दिनको आपूर्तिमा पठाउन सकिन्छ। Atorvastatin को औसत नगद मूल्य $ 250 सम्म चल्न सक्छ। यद्यपि सिंगलकेयर एटोरभास्टाटिन कूपनको साथ मूल्य १$ डलरमा कम गर्न सकिन्छ।
सिम्वास्टाटिन जेनेरिक औषधिको रूपमा पनि उपलब्ध छ। सामान्यतया निर्धारित स्टेटिनको रूपमा, सिम्वास्ट्याटिन प्रायः मेडिकेयर र बीमा योजनाहरू द्वारा आच्छादित हुन्छ। Simvastatin को औसत खुद्रा मूल्य $ 470 को आसपास छ। यद्यपि, सिम्वास्टेटिनको लागि एक छुट कार्डको साथ, एकलकेयर जस्तो, तपाईं सहभागी फार्मेसीहरूमा २० मिलीग्राम ट्याब्लेटको -०-दिन आपूर्तिको लागि $ १० भन्दा कम तिर्न सक्नुहुनेछ।
मानक खुराक १० मिलीग्राम एक पटक दैनिक (of० को मात्रा) २० मिलीग्राम एक पटक दैनिक (of० को मात्रा)
विशिष्ट मेडिकेयर कोपे $ 0– $ 16 $ 0– $ 9
एकलकेयर लागत $ १ + + + १० +
एटोरभास्टाटिन बनाम सिम्वास्टाटिनको सामान्य साइड इफेक्टहरू?
स्टेटिनको सबैभन्दा सामान्य साइड इफेक्टहरू, जस्तै एटोरवास्टाटिन र सिम्वास्टाटिन, पाचन समस्याहरू जस्तै पखाला, अपच, र मतलीजस्ता समस्याहरू समावेश गर्दछ। अन्य साइड इफेक्टमा चक्कर, र हात, खुट्टा, वा खुट्टा (edema) को सूजन समावेश छ। स्ट्याटिनले मांसपेशी दुख्ने (मायाल्जिया) वा मांसपेशी कमजोरी (मायोपथी) पनि निम्त्याउन सक्छ।
स्टेटिनको उच्च खुराकको साथ मांसपेशी दुख्ने जोखिम बढ्छ। यद्यपि, एटोरभास्टाटिनको तुलनामा, सिम्वास्टाटिनलाई मायाल्जियाको उच्च जोखिम मानिन्छ। केहि मानिसहरु संग एक हुन सक्छ मायाल्जियामा आनुवंशिक प्रकोप सिम्वास्टाटिनबाट जे भए पनि सबै स्ट्याटिनमा मांसपेशी दुख्ने जोखिम छ साइड इफेक्टको रूपमा, एफडीए प्रयोग सीमित छ सिम्वास्टाटिन mg० मिलीग्राम ट्याब्लेटहरूको जोखिम बढेको कारण।
अन्य सामान्य साइड इफेक्टहरू तल तालिकामा फेला पार्न सकिन्छ।
जोड़को दुखाई हो %% हो ०.%%
पखाला हो %% हो *
कब्ज हैन - हो दुई%
अपच हो %% हो *
मांसपेशी दुख्ने हो %% हो %%
नासोफ्यारेन्जाइटिस हो %% हैन -
चक्कर हो * हो %%
इडेमा हो * हो %%
स्रोत: डेलीमेड ( एटोरभास्टाटिन ), डेलीमेड ( सिम्वास्टाटिन )
एटोरवास्टाटिन बनाम सिमवास्टाटिनको ड्रग अन्तर्क्रिया
एटोरभास्टाटिन र सिम्वास्ट्याटिन मुख्यतया CYP3A4 एन्जाइम द्वारा कलेजोमा प्रशोधन गरिन्छ। ड्रग्स जसले अवरोध गर्दछ, वा रोक्दछ, यो इन्जाइमले रगतमा एटोरभास्टाटिन वा सिम्वास्टाटिनको स्तर बढाउन सक्छ। जब CYP3A4 अवरोधक जस्तो क्लेरिथ्रोमाइसिन वा itraconazole संग लिईन्छ, atorvastatin ले मांसपेशि दुख्ने (myalgia) वा मांसपेशी कमजोरी (मायोपैथी) को जोखिम बढाउन सक्छ। अंगूरको रस CYP3A4 अवरोधक पनि हो जसले एटोरभास्टाटिन र सिम्वास्टाटिनको स्तर बढाउन सक्छ। अर्कोतर्फ, ifampin र carbamazepine जस्ता औषधि CYP3A4 inducers हो कि शरीर मा atorvastatin र simvastatin को स्तर कम गर्न सक्छ।
रिटोनाभिर र लोपिनवीर जस्तो प्रोटीज अवरोधकहरूले शरीरमा स्टेटिन्सको स्तर बढाउन सक्छ। रगतमा स्टेटिनको मात्राले प्रतिकूल प्रभावहरूको बढि जोखिम निम्त्याउन सक्छ, मायाल्जिया सहित। एटोरभास्टाटिन वा सिम्वास्टाटिनको साथ लिदा फाइब्रेट ड्रग्स र नियासिनले मायाल्जियाको जोखिम पनि बढाउन सक्छ।
मौखिक गर्भनिरोधकको साथ एटोरवास्टाटिन लिनुले गर्भनिरोधक औषधिहरूको रगतको मात्रा बढाउन सक्छ।
वारफेरिनको साथ स्ट्याटिन लिनुले वारफेरिनको स्तर बढेको र रक्तस्राव हुने खतरा बढेको बताइएको छ। यद्यपि, atorvastatin हो हस्तक्षेप गर्ने सम्भावना छैन warfarin को प्रभाव संग।
औषधि औषधि वर्ग एटोरभास्टाटिन सिम्वास्टाटिन
अंगूरको रस CYP3A4 अवरोधकर्ताहरू हो हो
कार्बामाजेपाइन CYP3A4 inducers हो हो
दारुनावीर प्रोटीज अवरोधकर्ताहरू हो हो
फेनोफाइब्रेट Fibrates हो हो
नियासिन Antihyperlipidemic हो हो
Ethinyl estradiol मौखिक गर्भ निरोधक हो हैन
एटोरभास्टाटिन र सिम्वास्टाटिनको चेतावनी
दुबै एटोरभास्टाटिन र सिम्वास्टाटिनले मांसपेशी दुखाई (मायाल्जिया) वा मांसपेशि कमजोरी (मायोपथी) लाई मुछिएको प्रतिकूल घटनाहरूको कारण हुन सक्छ। गम्भीर अवस्थाहरूमा, यी स्टेटिनहरूले राबोडोमालिसिस, वा कंकाल मांसपेशीको द्रुत विघटनको कारण पनि बनाउन सक्छन्। मायोपैथीको एक दुर्लभ रूप, प्रतिरोध-मध्यस्थता नेक्रोटाइजिंग मायोपैथी (आईएमएनएम) पनि भनिन्छ स्टेटिन प्रयोगको साथ।
एटोरभास्टाटिन र सिम्वास्टाटिन मुख्यतया कलेजोमा मेटाबोलिज हुन्छन्। त्यसकारण, तिनीहरूको प्रयोगले कलेजो एन्जाइमको स्तरमा असामान्यता निम्त्याउन सक्छ। लिभर एन्जाइमहरू स्ट्याटिन थेरापीमा नजर राख्नु पर्छ। कलेजो रोग भएका मानिस पनि निगरानी गर्न वा पूर्ण रूपमा स्टेटिनबाट टाढा हुनु पर्छ।
गर्भवती महिला र नर्सि are गरिरहेका आमाहरूमा एटोरभास्टाटिन र सिम्वास्टाटिनबाट टाढा रहनु पर्छ। यी स्टेटिनहरूको जन्म दोषहरूको बढ्दो जोखिम हुन सक्छ।
एटोरभास्टाटिन बनाम सिम्वास्टाटिनको बारेमा प्राय: सोधिने प्रश्नहरू?
Atorvastatin के हो?
एटोरवास्टाटिन, यसको ब्रान्ड नाम लिपिटर द्वारा पनि चिनिन्छ, एक स्ट्याटिन औषधी हो जुन कोलेस्ट्रोल कम गर्न र मुटुको आघात र स्ट्रोकको जोखिम कम गर्न प्रयोग गर्दछ। Atorvastatin को सामान्य खुराक दायरा प्रति दिन १० देखि mg० मिलीग्राम बीच हुन्छ। एटोरवास्टाटिनको १ half घण्टा लामो आधा जीवन हुन्छ र दिनको कुनै पनि समयमा लिन सकिन्छ।
सिम्वास्टाटिन भनेको के हो?
सिम्वास्टाटिन यसको ब्राण्ड नाम, जोकरबाट पनि परिचित छ। यो एक स्टेटिन औषधी हो जसले कोलेस्ट्रोलको स्तर घटाउन सक्छ जसले फलस्वरूप हृदयघात र स्ट्रोकको जोखिम कम गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ। सिम्वास्टाटिनको सामान्य खुराक दायरा प्रति दिन पाँचदेखि mg० मिलिग्राम हो। सिम्वास्टाटिनको तुलनात्मक रूपमा छोटो आधा जीवन हुन्छ र साँझमा लिनको लागि सिफारिश गरिन्छ।
के एटोरभास्टाटिन र सिमवास्ट्याटिन एकै हुन्?
एटोरवास्टाटिन र सिम्वास्टाटिन दुबै एक औषधि वर्गसँग सम्बन्धित छ जसलाई HMG-CoA रिडक्ट्यास इनहिबिटरहरू, वा स्ट्याटिन भनिन्छ। ती दुबै LDL कोलेस्ट्रोल स्तर कम गर्न प्रयोग गरिन्छ। जे होस्, तिनीहरूसँग उपलब्ध सामर्थ्यहरू र तिनीहरू कसरी लिनेहरूमा केही भिन्नताहरू छन्।
के एटोरभास्टाटिन वा सिम्वास्टाटिन राम्रो छ?
एटोरभास्टाटिन र सिम्वास्ट्याटिन दुबै रगत कोलेस्ट्रॉल कम गर्नको लागि प्रभावकारी स्ट्याटिन औषधि हुन्। यद्यपि, एटोरभास्टाटिन अधिक शक्तिशाली स्ट्याटिन मानिन्छ। एटोरवास्टाटिन शरीरमा लामो समय सम्म रहन्छ र बिहान वा राती लिन सकिन्छ। सिम्वास्टाटिनको मांसपेशी दुख्ने वा कमजोरी हुने सम्भावना बढी हुन्छ एटोर्वास्टाटिन भन्दा विशेष गरी उच्च खुराकमा। निर्धारित चिकित्सकले केस-द्वारा-केस आधारमा सबैभन्दा प्रभावकारी स्ट्याटिन निर्धारण गर्दछ।
के म गर्भवती हुँदा एटोरवास्टाटिन वा सिम्वास्टाटिन प्रयोग गर्न सक्छु?
एटोरवास्टाटिन र सिम्वास्टाटिन गर्भावस्थाको समयमा प्रयोग गर्नु हुँदैन। कोलेस्ट्रॉलको स्तर गर्भावस्थामा बढ्न सक्छ र बढ्दो भ्रूणलाई समर्थन गर्न आवश्यक छ। त्यसकारण, गर्भावस्थामा यी स्टेटिनहरू लिन कुनै फाइदा छैन। तिनीहरू पनि गर्भावस्था मा भ्रूण हानि कारण हुन सक्छ।
के म एटोरभास्टाटिन वा सिमवास्टाटिन रक्सीको साथ प्रयोग गर्न सक्छु?
यस अनुसार हृदय रोग विशेषज्ञहरु सामान्य रूपमा स्टेटिन प्रयोगको साथमा मदिराको सेवन सुरक्षित हुन्छ। अत्यधिक रक्सीको सेवनले कलेजो रोग निम्त्याएको छ जहाँ समस्याहरू उत्पन्न हुन सक्छ। स्ट्याटिनको साथ लिभर एन्जाइमहरूलाई उपचारको क्रममा अनुगमन गरिनु पर्छ।
कुन स्टेटिनमा कमसेकम साइड इफेक्टको मात्रा छ?
स्टेटिन्स सामान्यतया न्यूनतम प्रतिकूल साइड इफेक्टको साथ सुरक्षित छन्। अमेरिकी हार्ट एसोसिएशन (एएचए) का अनुसार, स्टेटिनका फाइदाहरू सम्भावित जोखिमलाई कम गर्नु साइड इफेक्ट को। यद्यपि केहि स्टेटिनहरू प्रावास्टाटिन र फ्लुभास्ट्याटिन , simvastatin र atorvastatin भन्दा myalgia को कम जोखिम हुन सक्छ। कम खुराकमा दिइएको स्टेटिनहरूको तुलनामा, उच्च-डोज स्टेटिनहरूले साइड इफेक्टको सम्भावना बढी गर्दछ। उदाहरण को लागी, v० मिलीग्रामको सिम्वास्टाटिनको माइल्सिया हुने खतरा बढी हुन्छ। यस कारणका लागि, एफडीएले सिम्वास्ट्याटिनको यो खुराक केही व्यक्तिहरूमा मात्र सीमित गरेको छ।
एटोरभास्टाटिनको दीर्घकालीन साइड इफेक्टहरू के हुन्?
स्टेटिन थेरापीको दीर्घ-अवधिका साइड इफेक्टहरू व्यक्तिमा निर्भर हुन सक्छन्। लामो समयको लागि स्टेटिनको साइड इफेक्ट मांसपेशी दुख्ने, कलेजोको क्षति, रगतमा चिनी बढेको, र मेमोरीको समस्या समावेश हुन सक्छ। यद्यपि, लामो अवधिमा साइड इफेक्ट हुने जोखिम कम मानिन्छ जब औषधि निर्धारित र ठीक तरिकाले प्रशासित गरिन्छ।
के एटोरवास्टाटिन तपाईंको मिर्गौलाको लागि खराब छ?
किडनी सम्बन्धी समस्या भएकाहरूमा atorvastatin को खुराक समायोजित गर्न आवश्यक पर्दैन। गम्भीर किडनी समस्या भएका व्यक्तिहरूमा एटोरभास्टाटिन प्रयोगको अनुगमन गर्नुपर्ने हुन सक्छ।
सामान्यतया, एटोरभास्टाटिन मिर्गौलाको लागि खतरनाक हुँदैन। यद्यपि, एटोरवास्टाटिनको प्रयोगले राबोडोमालिसिसको बढि जोखिम निम्त्याउन सक्छ, जसले गम्भीर केसहरूमा तीव्र गुर्दे असफलता निम्त्याउन सक्छ। तपाईको डाक्टरसँग कुरा गर्नुहोस् यदि तपाईसँग स्टेटिन औषधि सुरू गर्नु अघि किडनी समस्याहरूको इतिहास छ।
7 सजिलो बन्धन को लागी ओछ्यान अन्तर्गत सर्वश्रेष्ठ प्रतिबन्ध
बेन्जोडियाजेपाइनहरू के हुन्?
के म काउन्टर मा फेंटरमाइन पाउन सक्छु?
जो चिन्ता xanax वा ativan को लागी राम्रो छ
स्याउ साइडर सिरका toenail कवक निको हुन्छ
कम पोटेशियम बाट निको हुन कती समय लाग्छ?
diflucan को लागी एलर्जी म अरु के लिन सक्छु
प्रति महिना enbrel लागत कति हुन्छ?